Ahoana ny famolavolana takelaka Android: Ny fomba rehetra | Vaovao momba ny gadget
Ahoana ny famolavolana tablety Android
Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny takelaka eny an-tsena dia mampiasa Android amin'ny maha rafitra miasa azy. Ka ny fisafidianana modely eny an-tsena no lehibe indrindra. Noho izany dia tsy maintsy manana foana ianao lafiny sasany amin'ny kaonty rehefa mividy takelaka vaovao. Rehefa afaka kelikely, dia mety hisy ny olana amin'ity takelaka ity.
Mety hitranga fa misy malware misolelaka hiditra ao aminy, na misy olana amin'ny fiasan'izy io. Na mieritreritra ny hivarotra azy ny tompony. Amin'ny tranga toy izany, vahaolana matetika matetika ao amin'ny takelaka Android ny filokana amin'ny fandefasana azy.
1 Inona no atao amin'ny famolavolana tablety Android?
2 Mametraha takelaka Android
2.1 Mamolavola endrika
2.2 Mamolavola takelaka ao amin'ny menio fanarenana
Inona no atao amin'ny famolavolana tablety Android?
Raha amin'ny fitaovana Android, toy ny takelaka, afaka miresaka momba ny famolavolana endrika na famerenana amin'ny laoniny avy amin'ny orinasa isika. Midika izany fa hamafana ny angona rehetra momba ilay takelaka voalaza. Ka ireo rakitra rehetra ao anatiny (sary, horonan-tsary, mozika, antontan-taratasy sns) ankoatry ny rindranasa izay nakarina dia hofoanana tanteraka. Tsy hisy ny soritr'ireto rakitra ireto amin'ny takelaka.
Ity dia dingana somary mahery setra, saingy marina izany hoy ny takelaka Android miverina amin'ny fanjakana niaviany. Hatramin'ny fandefasana endrika dia miverina amin'ny fanjakana nialany tamin'ny orinasa izy. Izany no antony ahafantarana azy koa amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny orinasa. Ity dia zavatra vita amin'ny fotoana tena voafaritra, satria midika ho very ny tahirin-kevitra rehetra amin'ny takelaka voalaza.
Noho izany, raha ny tompony mieritreritra ny hivarotra takelaka voalaza, na ny fanomezana azy amin'ny olon-kafa, dia fomba tsara iray hanakanana an'io olona tsy hiditra amin'ny data-nao. Raha niditra an-tsokosoko ny viriosy iray, inona no mety hitranga amin'ny fitaovana Android, ny formatting dia fomba iray hanesorana azy, raha tsy misy safidy hafa miasa amin'izany. Ka amin'ny toe-javatra sasany dia zavatra azo atao izany. Mba hahazoana azy amin'ny takelaka dia misy fomba roa samy hafa. Forma izay lazainay anao eto ambany.
Ahoana ny famolavolana ny iPad
Mametraha takelaka Android
Ny zavatra mahazatra dia ny amin'ny takelaka Android dia misy fomba roa samy hafa hanatanterahana ity endrika ity. Amin'ireo tranga roa ireo dia zavatra azontsika atao amin'ny takelaka io ihany. Tsy mila fitaovana fanampiny ianao hahafahana mamolavola azy. Na dia mety misy modely tsy mamela antsika na amin'ireto safidy roa ireto. Mety miankina amin'ny endriny tsirairay na maodely tsirairay avy izy io, ho fanampin'ny kinovan'ny rafitra fiasa ampiasainao.
Ny fomba voalohany handrafetana takelaka amin'ny Android dia avy amin'ny fikiranao manokana. Ao anatin'izy ireo dia misy sehatra iray ahafahana manomboka ity dingana ity. Noho izany, tsy maintsy manokatra ny toerana misy azy aloha isika. Raha vantany vao ao anatiny izy ireo, ny toerana manokana an'io fiasa io dia afaka miova amin'ny maodely iray mankany amin'ny iray hafa.
Amin'ny takelaka sasany dia mila miditra ao amin'ny faritra fiarovana isika. Raha any amin'ny hafa kosa dia ny fizarana safidy mandroso izay tsy maintsy ampidirintsika. Na ahoana na ahoana, na aiza na aiza toerana misy anao, ilay fizarana mahaliana antsika dia antsoina hoe Backup / Restore. Noho izany, azontsika atao ny mitady azy raha tsy ao anatin'ny fikirakira ny takelaka Android misy antsika mba ho haingana kokoa ny miditra ao amin'ilay takelaka. Raha vantany vao amin'ity fizarana ity dia afaka manomboka ny dingana.
Ny zavatra angatahina voalohany amin'ireo mpampiasa dia raha te hanao backup ianao. Toy ny rehefa manafatra endrika hamafana ireo angona rehetra ao amin'ilay takelaka isika, dia tsara ny manao kopia amin'ireo angona izay tsy tianao ho very. Raha ny Android dia afaka mamonjy backup mora foana ao amin'ny Google Drive isika. Rehefa nilaza ianao hoe mandika, dia azo atao ny mampiditra ny faritra famerenana ny angon-drakitra Factory.
Ao amin'ity fizarana ity manomboka ny dingan'ny famolavolana ny takelaka. Hanontaniana ny mpampiasa raha azony antoka ny zavatra tian'izy ireo hatao. Raha efa manana backup toy izany ianao dia afaka manomboka izao. Ka mila manome azy fotsiny ianao vao hanaiky. Avy eo, hanomboka ny fandrafetana an'ity takelaka Android ity. Mety maharitra minitra vitsy vao vita, miankina amin'ny habetsaky ny angona voatahiry ao.
Mamolavola takelaka ao amin'ny menio fanarenana
Misy fomba faharoa, mahomby hatrany amin'ny famolavolana tablety Android. Ny momba ny fampiasana ilay antsoina hoe menio fanarenana. Ny fidirana amin'izany dia tsy hitovy amin'ny maodely iray mankany amin'ny iray hafa, satria misy rafitra roa. Ny voalohany dia ny famonoana ny takelaka, ary avy eo tazomy ny bokotra herinaratra sy miakatra ho an'ny tsindry mandritra ny segondra vitsy, mandra-pisehon'ny menio eo amin'ny efijery. Amin'ny tranga faharoa dia mitovy ny fizotrany, tsy misy afa-tsy takelaka misy anao hanery sy hampidina ny haavony.
Noho izany, miankina amin'ny marika amin'ilay takelaka voalaza, dia misy ny fidirana amin'ilay menio voalaza. Raha vantany vao nampiasaina ny fomba resahina dia aseho eo amin'ny efijery ny menio misy safidy isan-karazany. Ny iray amin'ireo safidy eo amin'ny efijery dia Factory Reset na mamafa ny angona, ireo anarana roa ireo dia mety hiseho amin'ny tranga maro. Ity no safidy tianao hampiasaina amin'io fotoana io.
Ny fampiasana ny bokotra ambony sy ambany dia tokony hifindra eo amin'ireo safidy ireo. Rehefa tonga any amin'ny safidy hamafana ny angona ianao dia mila ampiasao ny bokotra herin'ny tablety hanamafisana. Ny efijery dia hampiseho hafatra manontany ny mpampiasa raha azony antoka fa te hanao izany izy ireo. Satria ny fizotran'ny fanaingoana dia nilaza fa hanomboka ny takelaka Android. Mba hanamafisana dia tsindrio indray ny bokotra herinaratra.
Amin'izany fomba izany dia hanomboka ny fandefasana ny takelaka voalaza amin'ny Android. Averina indray, ny fizotrany dia maharitra minitra vitsivitsy vao vita amin'ny takelaka. Rehefa vita dia hisy hafatra hiseho eo amin'ny efijery. Hanombohana azy indray, ny zavatra mahazatra dia tsy maintsy ataonao safidio ny safidy "reboot system now". Amin'izany fomba izany dia manomboka indray ny rafitra, saingy miaraka amin'ireo data rehetra efa voafafa tamin'ny takelaka. Miverina amin'ny fanjakana nialany tamin'ny orinasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Android » Ahoana ny famolavolana tablety Android
Ireo mpandahateny rafitra rafitra angovo, na ny fomba fampifangaroana ny kanto sy ny haitao
Motorola Sonic Boost, mpandahateny tsy misy tariby miaraka amin'i Alexa amin'ny vidiny mirary